Ikhaya » Iindaba kunye neehotele » Indlu ye-Ocean House kwihotele yeWatch Hill: Izitepsi ezinkulu ezikhokelela ndawo
I-Ocean House kwihotele yaseWatch Hill
I-Ocean House yindawo enkulu yokuhlala yaseVictorian esehotele eyakhiwe kuqala ngo-1868 kwiBluff Avenue kwisithili seWatch Hill esinembali yaseWesterly, eRhode Island.
Indlu yoqobo yase-Ocean yayisisakhiwo esiphambili kwiSithili seMbali yeWatch Hill, esidweliswe kwiRejista yeSizwe yeeNdawo zeMbali.
Ukuvalwa kwehotele yasekuqaleni kubandakanya ukungabikho kwezixhobo zale mihla, imeko yayo egugileyo, kunye nokungathobeli iikhowudi zokwakha zangoku.
Izinyuko ezikhulu zikhokelela ndawo, kwaye amanzi emvula angena ezindongeni.
Ihotele yokuqala yase-1868 yavalwa ngo-2003; Yadilizwa ngo-2005, kwaza kwavulwa indawo entsha ngo-2010 kwakule ndawo inesitokhwe esinefomathi nembonakalo yayo, kunye negama lokuqala. Zombini ezasekuqaleni kunye nokwakhiwa kwakhona kwazo kuyaphawuleka ngokungcangcazela kobugcisa baseVictorian kunye nokuma okuphuzi okuluhlaza.
Indlu yoqobo yase-Ocean yayiyindawo yokugqibela yexesha lama-Victorian ehotele kwilizwe laseRhode Island.
Indlu ye-Ocean House yayakhiwe ngo-1868. Yayincinci kunenye iihotele ebekwe kwiNduli yokuBukela, kodwa yandiswa ngokongezwa okuninzi kwiminyaka edlulileyo. Indlu yoqobo yase-Ocean yayisisakhiwo esiphambili kwiSithili seMbali yeWatch Hill, esidweliswe kwiRejista yeSizwe yeeNdawo zeMbali.
Ngo-Matshi 2004, i-Girouard Associates yase-New Canaan, e-Connecticut, yathenga eli ziko kwiindlalifa zosapho luka-Louis D. Miller, olwaluphethe ihotele ukusukela ngo-1938. I-Girouard Associates yayizimisele ukurhangqa i-Ocean House nokwakha amakhaya amahlanu amakhulu olwandle, kodwa uqhankqalazo. ilandelwe. Umthengi omtsha ekugqibeleni wafunyanwa, kwaye ngelixa umoya wesakhiwo sokuqala wagcinwa, esona sakhiwo sasingekho.
Izinto ezinxulumene nokuvalwa kweNdlu yoqobo yase-Ocean zibandakanya ukunqongophala kwezixhobo zale mihla, imeko yayo yokonakala, kunye nokungathobeli iikhowudi zokwakha zangoku. Indlu yoqobo yase-Ocean yayisebenza ngexesha lonyaka, ivulekile malunga neenyanga ezintathu ngonyaka, kwaye isakhiwo sasingenawo ukufudumeza, umoya opholileyo kunye nenkqubo yokungenisa umoya. Kule minyaka idlulileyo yokusebenza kwayo, imigangatho emibini ephezulu ibingasetyenziswanga kwaye ngamagumbi angama-59 kuphela ebenokubonelelwa ngenkonzo ngaphandle kwasekuqaleni kwe-159. Indawo yokuguga ibingenazo izinto eziyimfuneko, iinkonzo zenkonzo, iimfuno zokuphuma ngaphandle, iimfuno zokufikeleleka kwabakhubazekileyo, kunye nokupaka ukuhlangabezana neekhowudi zale mihla. Inqaku lephephandaba lachaza imeko yalo yokugqibela: “Izinyuko ezikhulu azisiyisi ndawo. Amanzi emvula angena eludongeni aze abaleke ezantsi ngemijelo enentambo. Ilifti yom-oki yaphukile. ”
Isakhiwo esineminyaka eli-138 ubudala besingahambelani neekhowudi zangoku kunye neekhowudi zokukhusela ubomi. Ubume bayo beplanga bonakaliswe kukufakwa ngokungakhethiyo kwezinto zombane, igesi, kunye nezinto zombhobho, kunye nokulungiswa kwakhona kwamagumbi ukuze afake izindlu zangasese zabucala. Iikhowudi zomlilo zaseRhode Island zahlaziywa zaza zanyanzeliswa ngakumbi emva komlilo we-nightclub weSikhululo sika-2003, nto leyo eyenza ukuba ukusilela kungoyiswa e-Ocean House. Ukuthotyelwa kwemigangatho yangoku yokhuseleko lobomi, kubandakanya neefestile ezikalwe ziinkanyamba ezinesakhelo esitsha, isiseko esitsha sekhonkrithi esenziwe ngentsimbi yokubopha yonke into, ukukhulula yonke ipeyinti ekhokelela ngaphakathi nangaphandle, kunye nokususwa komngundo wangaphakathi ofuna ukudilizwa kwezinto zangaphakathi.
Ngo-2004, i-Ocean House yayingavumelekanga ukuba ivule ngenxa yokusilela kweekhowudi; ihotele yoqobo yaphelisa ukusebenza ngo-2003 yaza yathengiswa. Uluntu luye lwafunda ngo-Matshi 2004 ukuba umphuhlisi ovela ngaphandle kwedolophu wayecwangcise ukuba atshise i-Ocean House kwaye akhe amakhaya amahlanu endaweni yayo, ke abaququzeleli baqala iphulo lokugcina isakhiwo kunye nokugcina ukufikelela kulwandle kunye nolwandle. Aba baququzeleli babandakanya abameli bePreserve Rhode Island, iRhode Island Historical Preservation, kunye neKhomishini yeLifa leMveli, kunye neNational Trust. Kufunyenwe omnye umthengi ocinga ukuba ezoqoqosho nezomzimba azinakwenzeka ukwenza ukuba esi sakhiwo sisebenze kunye nekhowudi ehambelanayo, kodwa wathembisa ukusakha ngokutsha ukusuka ezantsi. Isakhiwo santlandlolo sachithwa, kwaye kwakhiwa indawo entsha kwisiza.
Abayili beeprojekthi badibana nokumelana nokudilizwa kweNdlu ye-Ocean, kodwa baxoxa ngempumelelo yokwakha ngokutsha. Bacebisa ukuba kwakhiwe isakhiwo esasilungelelaniswe emva kwendlu yokuqala yase-Ocean House njengoko yayinjalo, malunga no-1908. Oku kungavumela ihotele enamagumbi angama-49 ukuba ifanelekile kwizitrato ezikufutshane, ngelixa isanda isiya elunxwemeni apho kungafakwa khona iikhondomu ezingama-23. Ikwanokwenza ukuba ibenamancedo kunye nemisebenzi yeenkonzo enokuthi yenze ukuba iprojekthi isebenze kwaye isebenze kwezoqoqosho.
Isakhiwo sokuqala se-Ocean House sachithwa ngoDisemba 2005 kwaye indawo elandelayo yavulwa ngo-2010.
Uyilo olutsha luyi-50,000 iinyawo ezikwere ezinkulu kuneyokuqala kwizikwere ezili-156,000. Iphinda yenze kwakhona ubunzima bokuqala kwaye ibuyise iinkcukacha ezithile zentsusa ezisuswe ngexesha lokuqhubeka kwesibonelelo, njengophahla lwangaphambili lwe-mansard kunye nendawo yokubasa. Ikwabandakanya izinto ezintsha, kubandakanya amaziko angaphantsi komhlaba kunye namaphiko amabini amatsha asuka kwisakhiwo esikhulu, esikhusela iindawo zokuhlala ezingabamelwane kwimisebenzi yehotele.
Indawo yoqobo yabhalwa phantsi, kwaye ubukhulu kunye nokuphakama kwazo kwagcinwa, kubandakanya ubungakanani kunye nendawo yeefestile. Iziqwenga zokwenyani zesakhiwo sokuqala zahlangulwa kwaye uyilo luphindaphinda iikholamu, iintloko kunye nezinto ezenziwe ngomthi. Izinto ezinokufikelelwa ngabantu ziinkuni ngelixa iinkcukacha ezingafikelelekiyo zenziwe ngezinto zokwenziwa ekulula ukuzilungisa.
Indawo entsha inamagumbi eendwendwe angama-49 kunye neendawo zokuhlala ezingama-23 zokuhlala kunye namagumbi okuhlangana, i-spa, i-lap, iphuli, indawo yezempilo kunye neeresityu. Uyilo lukwanikezela imisebenzi yenkonzo efunekayo kwiziko lala maxesha: iikhitshi ezihlaziyiweyo, ukulayisha iichweba, amagumbi oomatshini, iimfuno zomlilo (umz. Izinyuko ezingasafunekiyo), kunye namaziko abasebenzi.